ဤ နှစ်၊ သည် နှစ်၊ ထို နှစ် | MoeMaKa Burmese News & Media
ညီဆူးသစ် - မလွယ်တဲ့ခေတ်
ချိုးငှက်ခမျာ အနာတရ …။ဝေးကွာခဲ့သူတွေကို
ပြန်ဆုံခဲ့စေသည့် နှစ် …။
ထည်လည်တွဲစေခဲ့တဲ့ နှစ် …။
သံသယ ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တဲ့ နှစ် …။
ဖျားယောင်းခံရတဲ့ နှစ် …။
ဤ နှစ် ….
သည် နှစ် ….
ထို နှစ် …
၂၄ နှစ်ကျော် ကြာ